Ọkụkụ osikapa ọkụkọ - Goodao Technology Co., Ltd.
Chicken osikapa dumbbell
A na-eme ọgwụgwọ osikapa dumbell ọkụkọ a site na ara ọkụkọ 100% na osikapa ka ọ bụrụ bọọlụ buru ibu wee kechie ya na mkpanaka rawhide. Ngwọta ahụ enweghị ihe mgbakwunye, ụcha, ma ọ bụ ihe nchekwa yana enweghị ọka wit, ọka, ma ọ bụ soy.
Anyị na -ekwe nkwa na ihe niile mejupụtara bụ ihe okike, dị ọcha, nchekwa na ahụike. Ọdịdị na -atọ ọchị na ụtọ na -atọ ụtọ na -eme ka ọ bụrụ ọgwụgwọ ụgwọ ọrụ ọzụzụ zuru oke.
Protein Crube: 35%nkeji
Abụba Crube: 3.5% max
Ntụ ntụ: 3.5% max
Aha ngwaahịa Ọkụkọ osikapa Dumbell
Adabara Ụdị niile ma ọ bụrụ nkịta na nwamba karịrị ọnwa atọ
Ngwaahịa bụ isi ihe Ọkụkọ, osikapa
Anyị na -agbasokarị ụkpụrụ bụ isi “Quality Initial, Prestige Supreme”. Anyị ekpebisiela ike inye ndị na -azụ anyị ngwaahịa dị mma na ọnụ ahịa asọmpi, nnyefe ngwa ngwa na nkwado ọkachamara maka obere oge maka China Pet Snacks Dog and Cat Treats for Pet Healthy Food Chicken Dumbbells na Rice Dog Foods, echiche anyị ga -adị nyere aka gosipụta ntụkwasị obi nke ndị na -azụ ahịa na onyinye niile nke nkwado kacha akwụwa aka ọtọ, yana ngwaahịa ziri ezi.
Obere oge na -eduga maka ọgwụgwọ anụ ụlọ China na ọnụ nri nri anụ ụlọ, anyị na -anabata gị ka ị gaa ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ anyị. Ọ dịkwa mma ileta webụsaịtị anyị. Ndị otu ahịa anyị ga -enye gị ọrụ kacha mma. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ozi ndị ọzọ, cheta na ị nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị site na E-mail ma ọ bụ ekwentị. Anyị enweela olile anya na anyị na gị ga-enwe ezi mmekọrịta azụmaahịa ogologo oge site na ohere a, dabere na nha anya, uru ibe anyị site ugbu a ruo ọdịnihu.
Nke gara aga: Ọkụkọ na -ekpuchi Donut
Osote: Pressed ọkpụkpụ 10 cm na apịtị ọkụkọ
Ọkụkọ osikapa Dumbbell
Ọkụ Duck Cube
Akpụkpọ anụ ọkụkọ